Shiinaha GRH Guorui Hydraulics, oo ah hogaamiyaha meheradaha hawadu saaraha iyo alaab-qeybiye | Guorui
bamka marsho Haydarooliga
GRH Guorui Hydraulics, hogaamiyaha meheradaha shaqada hawada
Mashruuca shaqada hawada (AWP) waa nooc ka mid ah qalab khaas ah oo loogu talagalay loona soo saaray si loo daboolo baahiyaha howlaha sare. Waxay kor u qaadi kartaa hawlwadeennada, aaladaha, agabyada, iwm iyada oo loo marayo barxadda shaqada illaa loo qoondeeyay goob loogu talagalay rakibidda kala duwan, Hawlgallada Dayactirka, iyo in la siiyo dammaanad-qaad nabadgelyo leh hawlwadeennada Barxadda shaqada hawada waxay leedahay adeegyo ballaaran oo xagga hoose ah, waxayna leedahay astaamaha teknolojiyadda wax soo saarka degdegga ah iyo qiimaha lagu kordhiyay. Qeyb hooseeya inta badan waxaa ka mid ah dhismaha, dhismaha maraakiibta, soo saarista diyaaradaha, qaabeynta birta iyo dayactirka, qurxinta dhismaha iyo nadiifinta, injineernimada militariga, bakhaarada iyo saadka, garoonka diyaaradaha iyo howlaha saldhigyada iyo qeybaha kale.
Suuqa caalamiga ah, Waqooyiga Ameerika, Galbeedka Yurub iyo Jabbaan ayaa ah soosaarayaasha ugu waaweyn ee howlaha hawada. Terex iyo JLG oo Mareykanka ah, Sky jack oo ku yaal Kanada, Haulotte oo Faransiiska ah, iyo Aichi oo Japan ka tirsan ayaa miisaan ahaan aad u ballaaran, waxayna ka mid yihiin shanta adduun ee adduunka ugu sarreeya. Isku-soo-ururinta caalamiga ah ee AWP ayaa sarreysa, iyo noocyada gudaha ee Dingli iyo Xingbang ayaa si dhakhso leh u soo koraya. In 2018, Dingli kaalinta 10aad ee adduunka, iyo Hunan Xingbang culus Warshadaha kaalinta 19aad. Sanadihii la soo dhaafay, Lingong, Xugong, Liugong, Zhonglian iyo shirkado kale oo badan ayaa sidoo kale kordhiyay dadaalkooda R&D iyo dadaalka ballaarinta suuqa, waxayna ku jiraan qeybta labaad ee warshadaha. Mustaqbalka, iyadoo miisaanka suuqa uu sii ballaaranayo, shirkado badan oo soo saar dhaqameedyo ah ayaa sidoo kale ku soo qulqulaya aaggan. Waxaa jira doorsoomayaal waaweyn oo ka mid ah tartanka ka dhex jira noocyada gudaha ee warshadaha.
Horumarinta dhufto ee shaqada hawada Shiinaha waa mid soo daahay, suuqa gudahana sifiican ugama warqabo warshadaha. Meelaha shaqada hawada sare si ballaaran looma isticmaalo. Tiro badan oo ka mid ah shaqooyinka cirka ayaa wali ku badan iskuulada ama waxaa lagu beddelay forklifts. Xaalado dhawr ah, madal ayaa xitaa lagu rakibay dusha sare ee wiishka. Sanduuq si loo gaaro ujeeddada hawlgallada joogga sare. Sannadkii 2018, tirada AWP-yada ee Shiinaha waxay ahayd qiyaastii 95,000 oo unug, taas oo ah farqi weyn marka loo eego 600,000 oo cutubyo ka ah Mareykanka iyo 300,000 oo cutub oo toban waddan oo Yurub ah.
Laga soo bilaabo 2013, AWP gudaha wuxuu leeyahay celcelis ahaan kobaca isku dhafan ee qiyaastii 45%, welina wuxuu ku jiraa xilli koritaan xawaare sare leh. Hadday ahaan lahayd wadarta tirakoobka, tirinta qofkiiba ama soo-gelinta wax soo saarka, waxaa wada amniga, dhaqaalaha, iyo waxtarka sarreeya. Mustaqbalka, suuqa gudaha ee AWP wuxuu leeyahay ugu yaraan 5-10 jeer meel koritaan mustaqbalka.
Maaddaama ay tahay alaab-qeybiye heer sare ah oo ka shaqeeya dhulalka shaqada, Guorui Hydraulics wuxuu si qoto dheer ugu lug lahaa arimahan in ka badan 20 sano. Ku qalabaysan bambooyin marsho, matoorrada korontada ku shaqeeya, Noocyada kala duwan ee buuxa waxaa lagu qalabeeyaa soo saarayaasha gudaha iyo kuwa ajaanibta ah ee dhufto ee shaqada.
Mashiinka korantada ee si ballaaran loogu isticmaalo AWP waa mootada gawaarida ee loo isticmaalo in lagu wado gawaarida. Waxaa la wareejiyay shirkado shisheeye sanadihii hore. Guorui wuxuu soo bandhigay talanti heer sare ah gudaha iyo dibaddaba, wuxuu si madaxbanaan u sameeyay taxanaha GWD, wuxuuna soo saaray mashiin-haye hidde ah oo caadi ahaan xiran. Iyo bamka gacanta isku-dhafan ee isku-dhafan, ka dib markii ay xaqiijiyeen OEM-yada gudaha, ayaa hadda si buuxda loogu soo bandhigay suuqa.
Daahfurka alaab cusub oo laga keenay Guorui hydraulic ...
Nadiifiyaha Guorui hydraulic (GRH) wuxuu ahaa markab ...
Falanqaynta cilladaha guud ee Haydarooliga ...
Kala soocida filtarka hawo-qaadka ah
Farqiga u dhexeeya sys-haydiga furan ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2019: Dhammaan xuquuq dhowran. Products Guide - Products Featured - Tags Hot - Sitemap.xml - amp Mobile